Ukuphupha ngecartart Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngomculo, iquartet liqela labadlali abane. Banokuba ziimvumi neemvumi. Nangona kunjalo, ayizizo zonke iimvumi ekufuneka zidlale isixhobo esinye, inokuba zizinto ezine ezahlukeneyo. Ukongeza, igama elithi quartet lisetyenziselwa ukubiza isiqwenga somculo kwiqela labane.
Ukongeza kwindawo yomculo, iquartet ikwangumdlalo wekhadi othandwa ngakumbi ngabantwana. Injongo yalo mdlalo kukuqokelela iiseti zamakhadi amane kangangoko kunokwenzeka ukuba zihlangene.
1 Uphawu lwephupha «Quartet» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Quartet» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Quartet» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Quartet» - Ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, umfanekiso "wepartet" ubhekisa kwi umxholo phakathi kweenjongo okanye izinto ezenziwayo zezinto ezahlukeneyo ebomini bokuvuka. Umphuphi kufuneka ayithathele ingqalelo le nto kwixesha elizayo. Kwakhona, iqela labane linokubonisa ephupheni ukuba umntu kufuneka agxile kwizisombululo eziyinyani kwingxaki.
Iqela labane njengesimboli sephupha linokuzisa ishishini elifanelekileyo naye. Ngapha koko, umphuphi kungekudala uza kuba nokulindela i- umzuzu wokonwaba kunye nabahlobo abalungileyo bayayilinda. Nabani na owuva umculo wecartart okanye abone indibaniselwano yesine ephupheni lakhe uya kuzabalazela into ethile ngaphakathi el mundo ukuvuka okungahambelani kwinqanaba lakhe, okanye uya kubhenela kwimicimbi engezantsi.
Ukuba umntu oleleyo ucula kwi-quartet, ke, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, uya kudibana nabahlobo bakhe kwaye abe nexesha elimnandi. Ukuba, ngokuchaseneyo, uyayiva ingoma yela qela, balindele ukuba avuke. inkampani entle abanye abantu.
Ukuba umntu ophuphayo uqamba ingoma yekota kwiphupha, ucelwa ukuba agxile kwiprojekthi ethile kubomi bokwenyani. Kuya kufuneka uphephe naluphi na uhlobo lokuphazamiseka.
Ukuba umntu ubona abantwana bedlala amakhadi amane ebuthongweni babo, oku kunokuqwalaselwa njenge ukujongana ukwazisa. Oku kunokungonwabisi, kodwa ayizukuhlala ixesha elide. Ukuba umphuphi ngokwakhe udlala ngamakhadi e-quartet ephupheni lakhe, kufuneka anike ingqalelo kwabanye abantu kwimeko yakhe yangoku.
Uphawu lwephupha «Quartet» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwimbono esengqiqweni, uphawu lwephupha "iquartet" linokukhomba kwenye into ephupheni kwaye ligxininise intsingiselo yalo. Ke ngoko, iimeko zephupha kufuneka ziqwalaselwe ngononophelo ukufumana le nto ithile.
Ngapha koko, i-quartet inokuqondwa ephupheni njengomboniso wenani lesine. Kule meko, umfanekiso wephupha ufuzisela ukubamba okuhle kwaye ukumelana kubomi bokuvuka komphuphi. Uhlalutyo olude lwephupha, kunokwenzeka ukuba usebenzise uphawu lwephupha "amanani".
Kutoliko lwengqondo lwe "quartet" lweesimboli zamaphupha, ithuba lokuvela kweqela labane kolu hlobo linokubaluleka. Ukuba iquartet ibonwa ephupheni emngcwabeni, umntu oleleyo unokuhlala ekhangele phambili kwezinkulu. Utshintsho kwihlabathi elivukayo.
Itheko elimnandi, elinjengepati okanye umtshato, apho ikwayara enamalungu amane icula, luphawu oluqinisekileyo lokulala. Kuba ungqongwe ngabahlobo abaluncedo.
Uphawu lwephupha «Quartet» - ukutolika kokomoya
Uhlalutyo olugqithisileyo lwephupha lubona kwisimboli yequartet ephupheni isibonakaliso sokuba Umgaqo wokuba uphelele. Isakhono sokwenza ucwangco sikwanxulumene nalo mgaqo.